Bit By Bit - Ubungasese nkqubo ngemvume
Ubungasese nkqubo ngemvume
Kule website, senza umbhalo okupheleleyo Kancinci Bit: Research loLuntu Digital Age ziyafumaneka ngaphandle kweendleko. Elixa ufunda le ncwadi, siye enilinganisela ukuziphatha umfundi ngokomyinge. Ngokomzekelo, siya enilinganisela ngawaphi amacandelo Incwadi wafunda rhoqo. Le datha kuya kusinceda siphucule le ncwadi. Siye zikwaqhuba imifuniselo-ezibizwa iimvavanyo A / B -ukuze ukuze incede thina kuthengisa iikopi ezininzi ncwadi. Yonke into oyenzayo kuqhelekile kwiiwebhusayithi mihla. Lingachazwa njani nangakumbi ngezantsi apha, kwaye liza kubonisa into nzileyo noko siye safunda kwi blog yethu .
Yintoni inkcukacha esiziqokelelayo na?
Sisebenzisa Analytics Google ukuqokelela ulwazi malunga nendlela yokusebenzisana ne kule website. Ngaphezu koko, ezifana websites ezininzi, sisebenzisa cookies ukwandisa amava akho, ukuqokelela ulwazi undwendwe ngokubanzi, ukulandelela utyelelo kwi website yethu. Nceda thelekisa kwi "ngaba sisebenzisa cookies?" icandelo ngezantsi ulwazi malunga cookies kwaye usebenzise indlela.
Sazi njani ukuba usebenzise ulwazi lwakho?
Nayiphi na inkcazelo esiziqokelelayo zinokusetyenziswa kuphando, ukuphucula le ncwadi, yaye ukuba zincede ekulithengiseni le ncwadi.
Sazi njani ukukhusela iinkcukacha zakho?
Sisebenzisa iintlobo imiqathango yokhuseleko ukugcina ukhuseleko ulwazi osinike zona.
Uninzi ulwazi lokhangelo ukuba siye igcinwa Google yeAnalytics , yaye ungafunda okuninzi malunga yabo ngemigaqo zokhuseleko zabucala .
Amanqakwana ukuba udibanise zilawulwa hypothes.is , yaye ungafunda okuninzi malunga babo ngokwemiqathango nkonzo .
Website yethu isingathwa yi Github Amaphepha , yaye ungafunda okuninzi malunga Github ngayo ngokwemigaqo yenkonzo .
Ngaba sisebenzisa cookies?
Ewe. Cookies izifayile ezincinane ukuba isiza okanye udluliselo umnikezeli ngenkonzo yayo hard drive yekhompyutha yakho ngokusebenzisa umkhangeli yakho web (ukuba uvumela) eyenza iisayithi okanye iinkqubo ababoneleli ngeenkonzo ukuqaphela umkhangeli zokufaka ukukhumbula ulwazi oluthile.
Ukuze sikunikeze engcono site, Sinokusebenzisa iikuki ukuqonda Gcina ezikhethwayo zakho utyelelo elizayo ukuhlanganisela idata lamntu yezithuthi site.
Ngaba ukuxela naluphi na ulwazi kumaqela ngaphandle?
Asazi ukuthengisa, urhwebo, okanye ngenye ukutshintshela amaqela ngaphandle iinkcukacha zakho waziwe ngaphandle amaqela esithathu esimthembayo kusinceda isebenza website yethu, liqhuba uphando, okanye elinikeza inkonzo kuwe, ukuze nje loo maqela bayavuma ukuba uwugcine ulwazi oluyimfihlo . Kwakhona kukhulula inkcazelo yakho xa sikholelwa ukukhululwa kufanelekile ukuthobela umthetho, ukunyanzelisa imigaqo site yethu, okanye ukukhusela ezethu okanye abanye amalungelo, ipropati, okanye ukhuseleko.
amakhonkco iqela lesithathu
Maxa wambi, ngokwengqiqo yethu, ukuze zinokunxulumana websites iqela lesithathu. La maziko wesithathu zinemigaqo zabucala eyahlukileyo ezizimeleyo. Thina, ke ngoko, akukho xanduva okanye tyala ngenxa umxholo kunye nemisebenzi yezi ndawo ezinxulumene. Sekunjalo, sifuna ukukhusela isidima site yethu kwaye samkela nayiphi ingxelo malunga nezi sayithi.
Ngokusebenzisa site yethu, uyavuma ukuba yethu umgaqo-nkqubo wabucala.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uthumele i email info@bitbybitbook.com .
Utshintsho yabucala yethu nkqubo ngemvume
Sinakho ilungelo lokutshintsha wethu umgaqo-nkqubo wabucala amaxesha ngamaxesha ngokokubona lethu yedwa. Nceda khangela athile kweli candelo ukuze ngokutsha uguqulelo yangoku Ubungasese nkqubo ngemvume. Zonke iinkqubo zethu yangaphambili zinikiwe apha ngezantsi, yaye siya kuqhubeka ukuhlaziya eli phepha xa zifuneka naluphi na utshintsho.